Ny sasany heverina ho sary voalohany amin'ny AirPods Pro 2 hiseho | Avy amin'ny mac aho
Tsy miato izany. Raha naseho teo amin'ny fiarahamonina ity AirPods 3 vaovao ity dia efa manana ny sary "heverina" tafaporitsaka voalohany amin'ny headphones manaraka izay hatombok'i Apple isika: ny AirPods Pro 2.
Ireo sarin'ny tranga famandrihana sy ny sofina dia mampiseho ny fivoaran'ny AirPods Pro ho lasa taranaka faharoa. Ny headphones dia mbola manana 'tongotra' ihany, ary misy zavatra hafahafa miseho amin'ity tranga ity orifices.
Sary vitsivitsy amin'ilay heverina taranaka faharoa tamin'ny AirPods Pro vao niseho tamin'ny Internet. Mampiseho ireo sary ireo fa mety nilaozan'i Apple ny famolavolana ny headphone "tsy misy tongotra" nomaniny ho an'ny AirPods Pro 2.
Ireo sary dia mampiseho ny AirPods Pro 2 miaraka amina endrika mitovy amin'ilay maodely ankehitriny. ny mahasamihafa azy fotsiny dia ny tsy hita ny sensor optika mankany amin'ny farany ambany amin'ny sofina tsirairay. Izany dia mety vokatry ny fiovan'ny rafitra mankany amina sensor vaovao momba ny detection amin'ny hoditra, toa ireo izay vao hitantsika tamin'ny AirPods 3 vaovao natolotra tamin'ny fehezantenin'ny Alatsinainy.
Ao amin'ny tranga famandrihana dia misy lavaka fanamafisam-peo, ary tahony amin'ny fametahana tady.
Etsy ankilany, amin'ny tranga fiampangana dia misy fiovana lehibe. Ny charger an'ny AirPods Pro 2 amin'ireo sary ireo dia misy loaka mpandahateny izay heverina ho fampidirina lalindalina kokoa amin'ny fampiharana 'Find', ahafahanao mitendry feo hitadiavana ilay tranga, mitovy amin'ny mitranga rehefa very AirTag ianao. Misy ihany koa fametahana vy amin'ny sisiny, izay azo atao amin'ny fametahana tadiny.
Satria mbola tsy nazava tsara hoe avy aiza ireo sary ireo, ankehitriny dia hamela azy ireo "amin'ny quarantine" isika. Tamin'ity herinandro ity ny AirPods Pro dia nanao fanavaozana kely, manomboka izao dia manolo ny tranga famandrihana izay niaraka tamin'ny headphones miaraka amin'ny iray vaovao mifanaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby. MagSafe.
Azo inoana tokoa mbola misy fotoana sisa ka ny taranaka faharoa an'ny AirPods Pro dia mivoaka eny an-tsena. Noho izany dia ho hitantsika amin'ny famoahana amin'ny ho avy na miorina tsara ireo sary ireo, na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Ny sasany heverina ho sary voalohany amin'ny AirPods Pro 2 dia miseho
Interbrand dia mametraka an'i Apple ho mpitarika marika mandritra ny taona fahasivy manaraka